MANDALAY EVENT - Future Link
Future Link Group Co. Ltd., မှ ဦးဆောင်ပြီး USA, UK, Australia နှင့် Singapore နိုင်ငံများမှ နုိုင်ငံခြား ပညာရေးအတွေအကြုံနှင့် နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေထိုင်ခဲ့ရသောလူနေမှုပုံစံများကို ဝေမျှ ပြောကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
Future Link ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုသည် အခြားသောနိုင်ငံများစွာသို့ သွားရောက်ပညာသင်ယူလိုသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ထောင်ပေါင်းများစွာကို လိုအပ်သော အကူအညီနှင့် အကြံဥာဏ်များ ပေးအပ်လျက်ရှိပြီး အောင်မြင်စွာ အခိုင်အမာ ရပ်တည်နေသည့် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြည်တွင်းတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များကို သင်ယူလိုသော လူငယ်လူရွယ်များအတွက်လည်း College of Khamti ကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။
ယခု ဆွေးနွေးပွဲတွင် Panelist များ အဓိက ဆွေးနွေးပြောဆိုသွားမည့် အကြောင်းအရာများအပြင် Future Link Group Co., Ltd. မှလည်း နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားရန် စိတ်ပါဝင်စားသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သော Information များကို ဝေမျှသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိမျှော်မှန်းထားသော အနာဂတ်အောင်မြင်မှု ရရှိစေရန်အတွက် လိုအပ်သော ပညာရေးလမ်းကြောင်း ပုံဖော်သည့်အချိန်တွင် -
• USA, UK, Australia, Singapore နှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများ၌ ပညာသင်ယူနေချိန်အတွင်း ဖြစ်သန်းခဲ့ရသော Real Students life အတွေ့အကြုံများအကြောင်း ဝေမျှဆွေးနွေးမှုတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်နားထောင်နိုင်စေရန်။
• ကျောင်းရွေးချယ်မှု/ အကယ်၍ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ပညာသင်ယူမည်ဆိုပါက နိုင်ငံရွေးချယ်မှုတွင် အခြေခံကျသောအချက်များ သိရှိနိုင်စေရန်။
• ဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှုတွင် အဓိကထားစဉ်းစားသင့်သော အချက်များကို သိရှိနိုင်စေရန်။
• ပြည်ပတွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် မိဘများအနေဖြင့် ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်များကို သိရှိနိုင်စေရန်။
• ပညာသင်ယူပြီးနောက် မိမိ၏ Career Pathway ကို ရွေးချယ်ရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်စေရန်။
Director/Founder of Future Link Group Co., Ltd.
Managing Director in Future Link International Education Provider Principal in College of Khamti
B.C .Tech (Hons), M.C.Tech, University of Computer Studies
Mandalay MBA, University of Mandalay
Graduated from University of Computer Studies in 2000.
Earned Master Degree in Computer Studies by full time research and Thesis in 2002.
Dr. Ying Ying Woh Kham
Medical Aesthetic Doctor of De Beaute Medical Aesthetic Center
Deputy Managing Director of Frenzo Myanmar Co., Ltd.
Executive Committee Member of Myanmar Cosmetics Association
M.B., B.S (MDY), M.Sc Biomedical Engineering (NTU S'pore)
Graduated from University of Medicine Mandalay (UMM) in 2007
Earnedamaster’s degree by full-time coursework + thesis from Nanyang Technological University (NTU) Singapore in 2012
Awarded by Nanyang Technological University Singapore (NTU) in recognition of excellent performance in M.Sc (Biomedical Engineering)
Medical Aesthetic Doctor of De Beaute Medical Aesthetic Center Deputy Managing Director of Frenzo Myanmar Co., Ltd. Executive Committee Member of Myanmar Cosmetics Association M.B., B.S (MDY), M.Sc Biomedical Engineering (NTU S'pore) Diploma in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)
Graduated from University of Medicine Mandalay (UMM) in 2007 Earnedamaster’s degree by full-time coursework + thesis from Nanyang Technological University (NTU) Singapore in 2012
3rd Year of Bachelor of Design, University of Western Australia
Attended primary school in Yangon, Myanmar and Perth, Australia
Beechboro Christian School, Australia (Primary school)
Aranmore Catholic College, Australia (Middle school)
St. Brigid’s College, Australia (High school and boarding) Graduated as class of 2013
Mode/Actress Miss Golden Land Myanmar 2018
Miss Supranational Myanmar 2018 Epsom and Ewell high school, Surrey, UK.
Shwe Eain Si moved to London at the age of 12 and went to Epsom and Ewell High School which was located in Ewell east, surrey, London. In her earlier days in London she found it difficult to communicate with other students due to the language barrier but that she soon adapted.
After having spentafew years in Epsom and Ewell high she then attended Rosebery school for girls which haveagood stats and highest achievers within the London area.
5 November, 2018 (Monday)
No.652, 78th street, Bet: 37th street & 38th street, Mandalay.